ShweMinThar: လာပြီ လာပြီ ဆီဒိုးနား...
ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်တစ်ခု ဖြစ်သော ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာ တပ်ဆင်၍ ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခု အွန်လိုင်းတွင် ပြန့်နှံ့လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အလားတူ ရန်ကုန်ဆီဒိုးနားအပါအဝင် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ ချောင်းသာနှင့် မန္တလေးဒေသများရှိ ဟိုတယ်ပေါင်း ၆ ခုတို့တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း တည်းခိုခဲ့ကြသူများ၏ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုများလည်း ထွက်ပေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ နေပြည်တော်မှ ဟိုတယ်မှာ ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ် ဖြစ်ပြီး ယင်းဟိုတယ်အခန်းများအတွင်းမှ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများလည်း လိုချင်သူများ ရှိပါက မျှဝေပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
(အချိန်က လေးနာရီ... အခန်းတံခါးတစ်ခုကို ကောင်မလေးက သူ့ ချစ်သူမျက်နာကို ကြည့်လိုက်ပီး ညင်သာစွာ ပိတ်လိုက်တယ်.. ပြုံးပြတယ်.. ခဏလေးနော် ရေချိုးခန်းကို သွားလိုက်မယ်...တဲ့
အထက်ပါ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို နမူနာအဖြစ် မြည်းစမ်းကြည့်ရှုလိုပါက ဂူးဂဲလ်မှတစ်ဆင့် လက်ဝယ်ပိုင်ထားသူအား မေတ္တာရပ်ခံကာ https://docs.google.com/file/d/0B5IWeiuuAQIkYjBIdGdsTU5vV28 တွင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ နမူနာဗီဒီယို မှတ်တမ်းမှာ (၁၀)နာရီစာ ဖြတ်တောက်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆီဒိုးနားဟိုတယ် မန်နေဂျာနှင့် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အဆိုပါ လျှို့ဝှက် ကင်မရာရိုက်ကူးမှုမှတ်တမ်းများကို ယင်းတို့ဟိုတယ် ၀က်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ခိုးဝင်၍ ရယူသွားသည် ဟု ယူဆလျက်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် ဆီဒိုးနား ဝက်ဆိုက် http://www.sedonasmyanmar.com/ ကို ဖြုတ်ချထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဟိုတယ် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ၊ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ပြန်လည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်အမှန်မှာ အဆိုပါဟိုတယ်များတွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ တပ်ဆင်ခဲ့သူမှာ ဟိုတယ်များရှိ ဝန်ထမ်းများအတွင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်ကာ တပ်ဆင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေးကင်မရာများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်များတွင် လျှို့ဝှက်ကင်မရာများ တပ်ဆင်ကာ ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို ၄င်း၏ကွန်ပျူတာတွင် ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်များကို Delete လုပ်ထားခဲ့သော်လည်း ဖိုင်များ ပြန်လည်ရှာဖွေသည့် Software များဖြင့် ဖော်ထုတ် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက်နေထိုင်သူ မဟုတ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
နာမည်ကြီးဟိုတယ်အခန်းများအတွင်း မှတ်တမ်းဗီဒီယိုများကို ဂူးဂဲလ်တွင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်၍ ကြည့်ရှုသူများပြားနေသောကြောင့် လက်ရှိ အချိန်တွင် စိတ်ရှည်သည်းခံစောင့်ဆိုင်း၍ ကြည့်ရှုရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ဂူးဂဲလ်မှ အောက်ပါအတိုင်း Message ပေါ်လာခဲ့ပါက ယနေ့အတွက်တော့ စိတ်လျှော့၍ နောက်တစ်နေ့ ပြန်လည်ကြိုးစားကြည့်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဆီဒိုးနားသို့ သွားရောက်ခဲ့ဘူးသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အပြင်းအထန် လိုက်လံစုံစမ်းလျက်ရှိပြီး အချို့ဆိုလျှင် သွားရောက်ခဲ့သော စုံတွဲများ ဝါကျွတ်လျှင် မဖြစ်မနေ လက်ထပ်ရတော့မည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ယင်းဟိုတယ်များသို့ သွားရောက်ခဲ့ဘူးသော အချို့သော နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များအနေဖြင့်လည်း ယင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ပြင်ပ ဈေးကွက်သို့ ထွက်ပေါ်မလာစေရန် ဆုတောင်းကြရတော့မည့် အနေအထား ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း အွန်လိုင်း အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာမူ ၁၀ နာရီစာ ကွာလတီမြင့် ဗီဒီယို မှတ်တမ်းများ တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန့်နှံ့လျက် ရှိရာ မကြာခင်အချိန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ပြန့်နှံ့လာတော့မည် ဟု မျှော်လင့်ရပေသည်။
FROM-RED STAR NEWS
Other Links: http://www.libratrainingcenter.com/host/sedona-hidden-cam-2013.mp4.rar
နောက်ဆက်တွဲ : စီဒိုးနား ဖိုင်ဆိုက်ကြီးလို့ ဒေါင်းလို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေသူများအတွက် . . ဖိုင်တွေ ခွဲပြီး တင်ထားပေးတဲ့ လူရှိလို့ ပြန်ရှယ်တာပါ . .
Posted by Alex Aung at 6:03 PM
အပေါ်ကလင့်တွေကိုဒေါင်းရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာများကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမ၀င်ပါဘူး၊ ဗီယက်နမ် စကားနဲ့ပြန်ထားတာမို့ပါ။
Lee sedona......just fucking lessons !!! FUCK OFF BITCH !!!!!!